मानिस २ सय वर्षपछि भगवान बन्ने-इतिहासकारको दाबी…! – Jagaran Nepal
मानिस २ सय वर्षपछि भगवान बन्ने-इतिहासकारको दाबी…!
धर्मग्रन्थ तथा लोककथाहरुमा समेत मानिस भगवान बनेका विभिन्न सन्दर्भहरु अवश्य सुन्नुभएकै होला । त्यस्ता किम्वदन्तीहरु काल्पनिक मात्र हुन् भन्ने कुरा पनि भनिरहनु नपर्ला ।आखिर मानिस कुनै काल्पनिक पात्र अर्थात् भगवान बन्ने भन्ने कुरा कल्पनाको विषय बाहेक केही होइन । तर यो पढ्दा तपाइँलाई अचम्म लाग्नसक्छ की अबका केही वर्षपछि मानिस भगवान बन्नेछ ।
एकजना इतिहासकारका अनुसार केही वर्षपछि मानिसमा भगवान बन्ने तागत पलाउनेछ । २ सय वर्षपछि मानिसले आफुमा दैवी शक्ति जुटाउने ती इतिहासकार बताउँछन् ।यति मात्र होइन मानिसले पैसा खर्च गरेर आफ्नो सरीरको संरचना आफुले चाहेजस्तो बनाउन तथा बिगार्न पनि सक्नेछन् ।पैसाकै शक्तिलाई उपयोग गरेर मानिसले मृत्युलाई पनि काबुमा लिने र जति चाह्यो उति बाँच्ने दाबी ती इतिहासकारको छ ।
इजरायलको जेरुसेलमस्थित हिब्रु विश्वविद्यालयका इतिहासकार युवल नोह हरारीका अनुसार अबको २ सय वर्षपछि पैसावालहरु अाफुलाई आफुले चाहेको लामो समयसम्म जिउँदै राख्न सक्नेछन् ।बायोटेक्नोलोजी तथा जेनेटिक इन्जिनियरिंगका माध्यमबाट यस्तो चमत्कार हुने दाबी इतिहासकारको छ । यसको खर्च निकै धेरै हुनेछ । यस्तोमा पैसावाल मानिसहरु पैसाले नै जिवन तथा मृत्युलाई काबुमा राख्नसक्ने हरारीको दाबी छ ।
उनका अनुसार २ सय वर्षपछि आधुनिक मानिस यति सक्षम हुनेछ की बायोटेक्नोली तथा जेनेटिक इन्जिनियरिंगको प्रक्रियाका माध्यमबाट ऊ भगवान जत्तिकै शक्तिशालीहुनेछ वा उसमा दैवी शक्ति हासिल हुनेछ ।